यी ‘हेभीवेट’ हरूलाई चुनाव फलामको च्युरा - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
यी ‘हेभीवेट’ हरूलाई चुनाव फलामको च्युरा
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको आवश्यकता उत्तिकै छ । तर, मंसिरको तेस्रो सातापछि बन्ने प्रतिनिधिसभामा विगतमा एउटै राजनीतिक धार बोकेका यी दुईमध्ये एक अनुहार मात्र देख्न पाइनेछन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट डा. भट्टराई र श्रेष्ठबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले दुईमध्ये एउटा मात्र विजयी हुनेछन् । डा. भट्टराई र श्रेष्ठमध्ये एक जना प्रतिनिधिसभामा पुग्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।
गोरखा–२ को जस्तै परिदृश्य अरू निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि देखिएका छन् । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. भट्टराई र माओवादी केन्द्रका दोस्रो वरीयताका नेता श्रेष्ठबीचको चुनावी भिडन्तमा एक जना सांसद बन्नबाट वञ्चित हुने भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिएका अरू अनुहारहरूलाई पनि चुनाव जित्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनैका लागि राप्रपा विभाजन गराएका पशुपतिशमशेर राणा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बनेका राणालाई नेपाली कांग्रेसले सघाए पनि उनलाई चुनाव जित्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । स्थानीय राजनीतिमा भिजेका र तामाङ समुदायका लोकप्रिय नेता शेरबहादुर तामाङसामु राणाको उपस्थिति फितलो देखिँदै गएको छ । सो क्षेत्रबाट तामाङले फराकिलो मतान्तरले जित्ने बताइन्छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यसपटक पराजयको स्वाद चाख्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । मकवानपुर–१ बाट उठेका थापालाई कांग्रेसले समर्थन जनाए पनि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि र विरोधका कारण उनलाई तल्लो तहमा समर्थन नहुने देखिएको छ । केन्द्रीय तहमा थापालाई सघाउने निर्णय भएलगत्तै मकवानपुरका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू नेतृत्वविरुद्ध उभिँदै आएका छन् । सो क्षेत्रबाट एमालेका कृष्णप्रसाद दाहाल उठेका हुँदा र यसअघि पनि दाहालसँगै थापा पराजित भएकाले यसपटक पनि पराजित हुने देखिएको छ । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्थिति पनि नाजुक रहेको बताइन्छ । झापा–३ बाट उम्मेदवार बनेका सिटौलालाई राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले कडा टक्कर दिने देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा सो क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर र राप्रपा बलियो साबित भइसकेको हुँदा सिटौलालाई चुनाव जित्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । अझ, सो क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति रहेको एमालेले समेत लिङ्देनलाई सघाउने भएपछि उनको पक्षमा व्यापक माहोल बन्दै जान थालेको छ र सिटौलालाई पटकपटक जित्दै आएको आफ्नो क्षेत्र यसपटक गुम्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, दुवैपटकको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट जितेका प्रकाशमान सिंहका लागि यसपटकको चुनाव ‘पाठ सिकाउने’ चुनाव बन्दै छ । विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्र सुरुदेखि नै आक्रामक रूपमा चुनावी प्रचारमा होमिएका हुँदा सिंहलाई चुनाव जित्न फलामको च्युरा चपाएसरह हुने बताइन्छ । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार अनिल शर्मा पनि कमजोर नभएको हुँदा सिंहलाई यसपटक निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । यसरी नै मोरङ–५ मा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई पनि यसपटक एमालेका लोकप्रिय नेता लालबाबु पण्डितले कडा टक्कर दिने देखिएको छ । सांसद र मन्त्री बनेका बेला स्वच्छ छवि कायम राख्नुका साथै महŒवपूर्ण कार्यहरू गरेर चर्चित बनेका पण्डितसामु डा. कोइरालाले चुनौती ठान्न थालेको बताइन्छ ।
धनुषा–३ मा पनि यसपटक रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि र राप्रपाका शक्तिशाली नेता राजेन्द्र महतोबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सो क्षेत्रबाट निधिले पटकपटक चुनाव जित्दै आए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा राजपाले बाजी मारेको हुँदा महतोले सो क्षेत्र ताकेका हुन् । पहिलादेखि नै आफू उठ्दै आएको क्षेत्र सर्लाही–३ मा राजपाकै अर्का प्रभावशाली नेता महेन्द्र राय यादवलाई छाड्नुपर्ने भएपछि महतोले धनुषा–३ रोजेका हुन् । सो क्षेत्रका जनता निधिप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका हुँदा त्यसको फाइदा महतोले लिने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
दुईदुई पटक चुनाव हारिसकेका राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने यसपटक केही सुरक्षित क्षेत्र रोजेका छन् । उनी महोत्तरी–३ बाट उठ्दै छन् । सो क्षेत्रमा उनलाई कांग्रेसले समेत सघाएको हुँदा उनले बाजी मार्ने निश्चितजस्तै मानिन्छ । सर्लाहीबाट दुईपटकको संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेका ठाकुरले यसपटक सर्लाही–४ बाट उठ्दा अमरेशकुमार सिंह नै प्रतिस्पर्धी हुने भएपछि सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै महोत्तरीतिर लागेका हुन् ।